Thin Film Cooker (BM) Mugadziri | Yinrich
Kumba > Products > Kitchen Equipment > Thin Film Cooker (bm)
Mutetefilm cooker yakagadzirirwa kubika zvinhu zvine mapuroteni kana zvinhu zvinopisa. Nguva yekugara yechigadzirwa mune yakaonda firimu cooker ipfupi kwazvo. Iyo sisitimu yakagadzirirwa yakajairika kudzvanywa, kudzvanywa, vacuum kana post-vacuum yekubika. Iko kushandiswa kweiyo yakaonda firimu cooker kunogona kupa nekukurumidza kubika mhinduro, uye mhedzisiro yacho yakanaka. Uku kukurumidza kubuda kwemvura kunoreva kuti kutendeuka kweshuga kana chero zvigadzirwa zvemukaka zvinopisa zvishoma panguva yekubika kusvika kune yakasimba yekupedzisira.
Yinrich ndiyo yakanakisa yakaonda firimu cooker inogadzira, inopa kicheni michina, bhisikiti yekuzadza muchina, chokoreti wrapper, uye mutete firimu cooker ine yakanakisa evaporation maitiro.
Mushonga weshuga unopihwa nguva dzose muchikamu cheBM chekubikira, chine pre-heater, firimu cookers, vacuum supply system, pombi yekudyisa, yekuburitsa pombi uye nezvimwe .. Mamiriro ese ekubikira anodzorwa nePLC controller. Huremu hwese hunotakurwa kuburikidza nekutakura uye kuburitsa pombi inodzorwa ne frequency inverter.